Global Voices teny Malagasy » Sina: Mpampianatra lalàna iray amidy … · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Septambra 2010 19:32 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahasalamàna, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Tanora, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Tamin'ny herinandro lasa iny, nivezivezy eran'izao tontolo izao tany anaty sehatra fitorahana bilaogy kiritika tany ity sary eto ambany ity.
Tantara mampiasa loha eny an-dalambe
Tamin'ny 3 Septambra no nakàna ny sary tao Beijing. Eo amin'ny sary, ny Profesora Yang Zhizhu avy ao amin'ny Anjerimanontolo Fianarana ny Siansa Politika ho an'ny Tanora ao Sina  dia nihazona takelaka iray hilazany fa amidiny ho andevo ny tenany ho fanonerany ny nandikàny ny politikan'ny zaza tokana:
Yang Zhizhu no anarako ary teo aloha aho dia mpampianatra mpisolo toerana tao amin'ny Anjerimanontolo Fianarana ny Siansa Politika ho an'ny tanora any Sina. Bevohoka tsy nahy ny vadiko ary tsy marisika ny hanala zaza. Tamin'ny 21 Desambra 2009 izy no niteraka ny zanakay vavy faharoa. Ny Aprily tamin'ity taona ity, noroahan'ny anjerimanontolo aho. Teo amin'ny 960 Yan teo ny karamako isam-bolana, saingy 368 Yan sisa izany ankehitriny. Roa volana taty aoriana, mbola nakòn-dry zareo 960 Yan hafa indray aho. Manampy an'izany, ny komity miandraikitra ny fandrindrana fiainam-pianakaviana avy amin'ny distrikan'i Haidian dia mitaky ny handoavako 240,000 yuan ho “saram-panabeazana ara-tsosialy”. Tsy manam-bola aho ary ny hany sisa fomba azoko iantohana ny fandaniana ataoko dia ny fivarotako ny tenako. Satria tsy afaka intsony niantoka ny filàn'ireo taranako aho taorian'ny nahalafo ahy, dia te hametraka ny sandako ho ambonimbony kokoa any amin'ny 640,000 yuan any aho. Na iza na iza no te hividy ahy, dia ho andevon'izy ireo aho ary hanompo azy mandra-pahafatiko. Laviko ny fanampiana miendrika fanomezana satria tsy te ho laza kantsetsitra aho noho ny amin'ireo zanako.
Ilay sary dia tantara mampiasa loha eny an-dalambe mba hanairana ny sain'ny rehetra manoloana ny lalàna henjana loatra mikasika politikan'ny zaza tokana sy ny ‘saram-panabeazana ara-tsosialy’. Nanapa-kevitra ny handeha eny amin'ny fitsarana hitory ny komity miandraikitra ny fandrindrana fiainam-pianakaviana avy amin'ny distrikan'i Haidian i Yang. Raha voalazan'ny “Fitsipiky ny Saram-panabeazana ara-tsosialy”  navoaka tamin'ny 2 Septambra 2010, ilay sara 240,000 yuan dia nokajiana avy tamin'ny fampitomboana in-tsivy ny totalim-bola miditra aminy isan-taona:
i Yang dia nandefa famintinana resadresaka iray nifanaovany tamin'ny T.V  tao amin'ny bilaoginy tamin'ny 7 Septambra mba hanazavany ny tena fototra ijoroan'ny dingana ara-pitsarana nataony:
Q: Maninona ianao no mandà tsy handoa ny “Saram-panabeazana ara-tsosialy”?
A: Tsy misy antony tokony handoavana an'izany. Isika no mampisakafo ny zanatsika, tsy ny fiarahamonina na ny governemanta. I Renan aza (anaran'ilay vaviaivo) tsy soratana ara-dàlana akory ho isan'ny ankohonanay. Ao anatina firenena toy itony, rehefa tsy voasoratra ara-dalàna ho isan'ny ankohonana ianao, tsy raisina ho toy ny olombelona manan-jo ianao, tsy resahana ny fiahiana ny ara-pahasalamana. Sahala amin'ny hoe mamahana ny biby fiompinao ianao. Kanefa, ny Governemanta Sinoa tsy mangataka amin'izay manana biby fiompy hoe mandoava “saram-panabeazana ara-tsosialy”. Ny hany mba fiahiana ara-pahasalamana azon'i Renan hatreto dia ny fanaovana vaksiny fanefitra, nandoavana yuan roa na raha lafo indrindra dia ampolony. Nefa terena isika handoa ho an'ny hafa, izay tena mihoam-pampana tokoa. Tsy vitan'izay, taorian'ny nahaterahan'i Renan, notapahana koa ny fanampiana tokony ho an'ilay zanako voalohany. Io vola io anefa dia tokony ho ampy handoavana ny vaksiny rehetra. Rehefa mitombo i Renan, tsy maintsy mandoa hetra koa izy, mbola ho ambony noho izay ho tombony tokony ho azony mandritry ny androm-piainany koa ny masom-bola haloany…
Q: Inona avy no sakana ateraky ny fanerena tsy hiteraka afa-tsy “zaza tokana” eo amin'ny fivoarana maharitry ny fiarahamonina Sinoa?
A:… Maro ireo vehivavy mitondra vohoka no tsy sahy manantona hopitaly ara-dalàna noho ny politikan'ny zaza tokana. Ny fanavahana ho lahy sy vavy ary ny fananahana amporisihan'ny politikan'ny fandrindrana fiainam-pianakaviana dia nitarika tamin'ny fitomboan'ny fanalàn-jaza eny anivon'ny tanora. Ny fanambadiana sy ny fiterahana tara loatra dia mampitombo ny isan'ny fahaterahana saropady/be olana. Ny hoe ankohonana “iray-zaza iray” koa dia nanova be ny fomba fahizay nentina nanabe ny ankizy ary nahatonga ny zaza maro ho diso hanta. Ny sazy ara-bola sy ny “Saram-panabeazana ara-tsosialy” dia nanakana ny fianakaviana tsy ho afa-mitsinjo lavitra ny fanabeazana ny ankizy. Vinavinaina ho misy any amin'ny 0.1 lavitrisa any ny fahaterahana tsy voasoratra ara-panjakana any amin'ny faritra ambanivohitra eto Sina, izay midika fa ny fiharian'ny olona maherin'ny 0.4 lavitrisa no voakasika amin'izany. Izany no antony ilazana fa ny politika famerana ny isan-jaza ateraka dia tsy nitondra velively zavatsoa ho an'ny taranaka fa ny mifanohitra amin'izany aza, namoroma tontolo mahonena ho an'ireo ankizy izany ary ao anatin'io ry zareo no mitombo.
Ity ambany ity ny video iray tamin'ny resadresaka nataon'i Yang mivady mikasika ny toe-piainan-dry zareo taorian'ny nandikàn-dry zareo ny politikan'ny zaza tokana:
Ako sy fanohanana
Nahasarika fanohanana maro teo anivon'ny aterineto ny hetsika nataon'i Yang. Ao anatin'ny toerana fametrahana fanamarihana ao amin'ny bilaoginy , i feichujisheng da niteny fa:
Ny hetsika nataon'i Yang dia nanosika ahy haneho ny fitokisantsika amin'ny marina fa tsy ho mpitazam-potsiny. Izany no antony nanokafako ity kaonty ity hanehoako ny fanohanako ny hetsik'i profesora Yang. avy aty Shandong ao no nitondra ny fanohanako. Raha toa ianao mihevitra ny hanao fanehoan-kevitra eny an-dàlambe, izaho no voalohany hanaraka. Vonona aho ny hanokan-tena hiaro ny fitakian'ny vahoaka Sinoa amin'ny resaka zo ara-pananahana sy ny fahalalahana.
Teraka tamin'ny 1974 aho, andiany voalohany nizaka ny fandrindrana fiainam-pianakaviana. Raha araka ny politika tamin'izany fotoana izany, tsy maintsy niatrika fandidiana ho famatorana tranon-jaza ny reniko ary tsy nahazo niteraka fanindroany raha tsy enin-taona tany aoriana. ( Novàna io politika famatorana tranon-jaza io tamin'ny 1975.) Kanefa, tany amin'ny taona 80 tany ho any, niova indray ny politika, tokana ihany no zaza azon'ny mpivady ateraka. Nahatsiaro tena ho toy ny nofitahan'ny governemanta ireo ray sy reniko. Tsy manana mpiray tam-po aho na iray aza ary tsy sambatra. Nanova ny maha izaho ahy ny politikan'ny zaza tokana. Ankehitriny, amin'izao maha ao anaty fahanterana ny ray aman-dreniko izao, mila manokana fotoana hikarakarana ny zanako manokana aho. Tsy afaka manokana fotoana betsaka hiarahana amin'ireo ray aman-dreniko. Tena hitako ho tsy afa-manampy mihitsy aho rehefa injay ka miditra hopitaly ry zareo. Miainga amin'izay zavatra niainako, io karazana fanaraha-maso ny fiterahana io dia tsy araka izay maha-olombelona sy mahamenatra. Hiady hanohitra an'io aho.
jyc__2 niteny hoe:
Toro-hevitra kely sy bitika ho an'i Profesora Yang (ho torolalana monja ihany)
1. Aza diso entin'ny fihetseham-po loatra, mitonia ary tandremo ny vava sy ny zavatra atao.
2. Amin'ny naha-mpampianatra lalàna, nahoana ianao tsy nampiasa fomba fiady mifanaraka amin'ny lalàna? Azo iadian-kevitra ny zavatra nataon'ny komitin'ny fandrindrana fiainam-pianakaviana sy ny sekoly. Tohanako ny fanehoanao ny hevitrao any anatin'ny bilaoginao.
3. Farany: ny kisoa rehefa maty dia tsy matahotra rano mangotraka intsony, na feno parasy aza eo ambony hoditrao tsy ho renao hangidihidy intsony izany. Raha tsy manam-bola handoavana ny sazy ianao, inona no azon-dry zareo hatao eo? Ny fiarahamonina Sinoa rahateo efa tsy tan-dalàna hatrizay.
180 thousands, iray isan'ny nizaka ny vokatry ny politikan'ny zaza tokana, nilaza hoe,
Profesora Yang, namela hafatra tao amin'ny bilaoginao aho tany aloha tany.
Iray amin'ireo reny “fatra nihoatra” aho araka ny komitin'ny fandrindrana fiainam-pianakaviana tao amin'ny tanànan'i Zhongguan.
Tamin'ny Zoma lasa teo, nameno taratasy fanoratana fiankohonana tao amin'ilay komity aho ary ny “saram-pamnabeazana ara-tsosialy” nasiana fanalefahana dia 180.000 Yans.
Ianao izao no mpisolo tena anay, miaraka amin'ny hetsika ataonao, handroso isika, misaotra anao.
Ao amin'ny fitorahana bilaogy kiritika sina, ny iray tamin'ireo fanapariahana dia nisy namerina nandefa in-3611, mitondra fanamarihana i 1358 :
@韩浩月 : Misy resaka mahatsikaiky mampalahelo momba ny “saram-panabeazana ara-tsosialy”: misy raiamandreny namoy ny zanak'izy ireo faharoa tamina loza tato anatin'ny herintaona eo ary nangataka tamin'ny komitin'ny fandrindrana fiainam-pianakaviana mba hamerina amin'izy ireo ny vola satria tsy mila intsony izay resaka ‘fanabeazana ara-tsosialy’ ilay zaza. Namaly ny komity fa tsy misy mihitsy didy milaza fa tokony haverina ny vola (lamandy). Izany no atao hoe mitelin-kena miaraka amin'ny taolana! Mba fanalàna hamohamo tsy misy fotony! (05:18 Sep 11)
valimteny ho an'i @LANE1092: Tsy mora mihitsy ny zava-misy. Ny famahana/famotsorana ny fanaraha-maso tsy voatery mihitsy ho tonga any amin'ny fidanganan'ny isan'ny mponina. Ohatra ao Hong Kong, ny governemanta dia mandrisika ny olona hiteraka maro. Malalaka ianao hiteraka hatramin'ny dimy ary ry zareo mihitsy no hitondra fanampiana. Na izany aza anefa dia mbola miiba foana ny tondro maneho ny fitomboan'isan'ny mponina manaraka ny fomba voajanahary any amin-dry zareo.
Tena mendrika fankahalàna izany! Taona maro lasa izay, nanana ny zanany faharoa ny dadatoako (satria maty talohan'izay ny zanany voalohany ary naniry ny mba hanana iray hafa izy) . Nandritry ny 8 taona, tsy nahazo afa-tsy ny mari-karama fototra izy ary nalàna hatramin'ny karatra maha-mpikambana azy tao amin'ny antoko sy ny maha-mpampianatra azy mihisy koa. Soa ihany, tena mamiratra tokoa ireo zanany roa vavy ankehitriny, fa raha tsy izany dia ho feno nenina angamba izy. (20:02, Sep 10)
Fahatsiarovana an'i Chen Guangcheng
Ny hetsik'i Yang dia nifanandrify tamin'ny namotsorana an'ilay mpisolovava malaza tsy mikiraro mpiaro zon'olombelona Chen Guangcheng , izay nanokan-tena hiady hiaro ny zo hanan-janaka any amin'ny faritra ambanivohitr'i Sina. Voaheloka 4 taona sy 3 volana ho any am-ponja i Chen ary mbola araha-maso taorian'ny famotsorana azy tamin'ny 9 Septambra. Ao anatin'ny lisitra maintin'ny ankabeazan'ireo lohamilima fikarohana ao an-toerana ny anarany. Kanefa kosa, nanome tsirin-kevitra ho an'olona marobe ireo hetsika nataony ary i Yang dia isan'ny iray amin'ireo mpanaraka azy akaiky.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/09/19/9188/
 Anjerimanontolo Fianarana ny Siansa Politika ho an'ny Tanora ao Sina: http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%9D%92%E5%B9%B4%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AD%A6%E9%99%A2
 “Fitsipiky ny Saram-panabeazana ara-tsosialy”: http://yzz661023.blog.163.com/blog/static/3236657201072822334795
 famintinana resadresaka iray nifanaovany tamin'ny T.V: http://blog.sina.com.cn/s/blog_53a02d240100lgno.html
 toerana fametrahana fanamarihana ao amin'ny bilaoginy: http://yzz661023.blog.163.com/blog/static/32366572010810113515865
 mitondra fanamarihana i 1358: http://t.sina.com.cn/1642326133/wr0nG3rXSG
 namotsorana an'ilay mpisolovava malaza tsy mikiraro mpiaro zon'olombelona Chen Guangcheng: http://chrdnet.org/2010/09/08/activist-chen-guangcheng-released-after-serving-full-sentence